[Review] Top 5 Mặt nạ ngủ Innisfree nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Mặt nạ ngủ Innisfree nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Amamaski obuso athathwa njengendlela yokukusiza ukuthi uthole isikhumba esicwebezelayo nesibushelelezi. Ngaphandle kwalokho, imaski yokulala yohlobo lwe-Innisfree ikhethwa ngabesifazane abaningi. Ngakho-ke sijoyine ukuze uthole abaphezulu aba-5 Imaski yokulala ye-Innisfree Iluphi uhlobo olungcono kakhulu namuhla, ngaphansi kwalesi sihloko.
1 Mayelana ne-Innisfree brand
2 Ingabe imaski yokulala ye-Innisfree ilungele isikhumba? Imuphi umphumela?
2.1 Izinzuzo zokulala ze-Innisfree
3 Imibandela yokukhetha imaski elungile ye-Innisfree
3.1 Khetha imikhiqizo ngokuya ngesimo sesikhumba sakho
3.2 Khetha kumaski oketshezi, ikristalu noma ukhilimu
3.3 Sebenzisa imaski yobumba noma imaski yephepha
4 Amamaski ama-Innisfree aphezulu ayi-5 adumile namuhla
4.1 1. Imaski yokulala yehalananda ye-Innisfree yazo zonke izinhlobo zesikhumba
4.2 2. I-Innisfree Capsule Recipe Pack Sleeping Mask yazo zonke Izinhlobo Zesikhumba
4.3 3. I-Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack ilungele zonke izinhlobo zesikhumba
4.4 4. I-Innisfree Mineral Sparkling Night Spa Imaski yokulala yesikhumba esomile
4.5 5. I-Innisfree Jeju Root Energy Mask yokulala yesikhumba sezinduna
5 Imiyalelo yokuthi usetshenziswa kanjani imaski yokulala ye-Innisfree ngempumelelo
Mayelana ne-Innisfree brand
I-Innisfree iwuphawu olungaphansi kokuphathwa kweqembu lezimonyo elihamba phambili lase-Korea, i-Amore Pacific. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yalo mkhiqizo yonke ikhishwe emvelweni, ngakho-ke ilungile kakhulu. Lo mkhiqizo unemigqa eminingi yemikhiqizo ehlukene efana nejeli yokugeza, isikrini selanga, izimonyo namamaski, njll.
Ngakolunye uhlangothi, i-Innisfree yethulwa ngokusemthethweni ngo-2000 eKorea. Nakuba kuphela uhlobo oluncane oluncane, kodwa imigqa yomkhiqizo yalolu hlobo ihlale ithola ukubonga okuningi kumakhasimende. Ngokuhamba kwesikhathi sisebenza emakethe, lolu phawu lwethenjwa abantu abaningi futhi lunesikhundla esithile emakethe.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kuzuze ukwethenjwa amakhasimende, umkhiqizo womkhiqizo ngamunye uma ufakwa emakethe, wonke uthathwa ezithakweni eziphephile neziyingozi zesikhumba. Ngaphandle kwalokho, iphinde idlule ocwaningweni oluningi kanye nokukhiqiza nokuhlola ngokucophelela, okusiza ukuqinisekisa ukuthi ifanele isikhumba somuntu, ikakhulukazi kubantu base-Asiya.
Ngaphezu kwalokho, manje lolu hlobo lukhona emazweni amaningi ahlukene futhi kuhlanganise neVietnam. Ngesikhathi esifanayo, izitolo zalolu hlobo zivela ezifundazweni eziningi ezahlukene. Ngakho-ke, uzozithengela kalula imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba yalo mkhiqizo.
Ingabe imaski yokulala ye-Innisfree ilungele isikhumba? Imuphi umphumela?
Kunezinhlobo eziningi emakethe namuhla imaski yokulala ezahlukene, okwenza uzibuze Imaski yokulala ye-Innisfree kuhle lokho? Nokho, ngemigqa yomkhiqizo ngaphansi komkhiqizo we-Innisfree, ungaqiniseka ngokuphelele ngekhwalithi nokuphepha kwawo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo wamaski wokulala walo mkhiqizo uyacwaningwa futhi wenziwa ngefomula ekhethekile, elungele isikhumba sase-Asia.
Ngakolunye uhlangothi, imikhiqizo yonke yenziwe ngezithako zemvelo futhi iyingozi kakhulu esikhumbeni. Ikakhulukazi, ngeke kubangele ukucasuka kwesikhumba kanye nokungezwani komzimba ngemva kokusetshenziswa. Ngaphandle kwalokho, umugqa wamaski wokulala walolu hlobo uhluke kakhulu, okusiza ukuba ukhethe ngokukhululekile ngokuvumelana nezidingo zakho.
Izinzuzo zokulala ze-Innisfree
Akuyona nje ephephile esikhumbeni, kodwa lo mugqa womkhiqizo ubuye ulethe izinzuzo eziningi ezinkulu esikhumbeni. Isiza isikhumba sakho sibe bushelelezi ngaphandle kokwenza lutho, sinikeze isikhumba sakho inani elidingekayo lomswakama. Ngaphandle kwalokho, kuyasiza nokuvuselela isikhumba sakho ngemuva kokusetshenziswa ngakunye.
Nokho, ukushintsha kwesikhumba ngokushesha noma kancane ngemva kokusetshenziswa kuzoncika kakhulu ohlotsheni lwesikhumba sakho.
Imibandela yokukhetha imaski elungile ye-Innisfree
Njengoba kushiwo, imaski ye-Innisfree ihluke kakhulu, kodwa umugqa we-mask ngamunye uzofaneleka ezinhlotsheni ezahlukene zesikhumba. Yingakho lapho ukhetha umkhiqizo Lesi sifihla-buso sokulala se-Innisfreekufanele usekelwe kulezi zindlela zokunquma ezilandelayo:
Khetha imikhiqizo ngokuya ngesimo sesikhumba sakho
Ngokuvamile isikhumba sakho sizohlukaniswa sibe izinhlobo zesikhumba ezifana nesikhumba esivamile, isikhumba esomile, isikhumba esibucayi kanye nesikhumba esinamafutha. Ngaphezu kwalokho, isikhumba ngasinye sizoba nezici ezihlukile, ngakho-ke sizodinga imikhiqizo yokunakekelwa okukhethekile. Ngakho-ke, lapho ukhetha imaski, kufanele unake isimo sakho sesikhumba.
Ngamaski e-Innisfree, ahlukene kakhulu ngezithako futhi ikakhulukazi awomdabu wemvelo. Kodwa isithako ngasinye sizoba nokusetshenziswa okuhlukene okufana netiye eliluhlaza elinemiphumela eqeda ukuvuvukala, ukupholisa isikhumba, uju lunomphumela wokuvuselela isikhumba sakho, njll. Yingakho kufanele uthembele ekusetshenzisweni okuhlosiwe.Imikhiqizo ukuze ukwazi ukukhetha okulungile. umkhiqizo.
Khetha kumaski oketshezi, ikristalu noma ukhilimu
Eqinisweni, imaski ngayinye izoba nokuthungwa okuhlukile, ukuze ivumelane nohlobo ngalunye lwesikhumba. Ngakho-ke, ukuze ukwazi ukuzikhethela umkhiqizo ofaneleka kakhulu, kufanele usekelwe esikhumbeni sakho ukuze ukhethe.
Sebenzisa imaski yobumba noma imaski yephepha
Kumaski ephepha kuzoletha ukusebenza kahle okuphezulu kakhulu ekususeni ubuthi esikhumbeni kanye nokunakekelwa kwesikhumba okufanele kakhulu, ikakhulukazi ngesikhumba esinamafutha kanye nezimbotshana ezinkulu. Ngaphandle kwalokho, imaski yeshidi izosiza isikhumba sakho sinikezwe zonke izakhi ezidingekayo. Ukusuka lapho, kuyasiza ukwenza isikhumba sakho sibe nempilo futhi kubambezele ukuguga kwesikhumba, njll. Ngakho-ke kufanele uncike esimweni sesikhumba sakho ukuze ukwazi ukukhetha umkhiqizo ofanele.
Amamaski ama-Innisfree aphezulu ayi-5 adumile namuhla
Njengoba kushiwo Imaski yokulala ye-Innisfree ezihlukahlukene kakhulu. Nawa amamaski ama-Innisfree aphezulu ayi-5 adumile namuhla, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
1. Imaski yokulala yehalananda ye-Innisfree yazo zonke izinhlobo zesikhumba
Lona umugqa womkhiqizo onezithako ezivela ku-Jeju organic pomegranates, osebenza ukuvikela impilo yesikhumba emiphumeleni yemvelo yangaphandle kanye nokuvimbela ukuguga ngaphakathi. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo futhi unamandla okunikeza umswakama esikhumbeni ukukunikeza ubuhle obukhazimulayo.
Izithako eziyinhloko zalo mkhiqizo zikhishwa epomegranate ebomvu Amanzi, i-Eau, i-Aqua, i-Peg-40, i-1,2-Hexanediol, i-Lactic Acid, njll Kanye nezinye izinhlanganisela eziningi. Ngalezi zinto zizoba nomthelela onamandla kakhulu ekulweni nokuguga.
Ngaphezu kwalokho, nazo, futhi zakha umgoqo wokuzivikela kanye nokugcina isikhumba simanzi. Lo mkhiqizo ungasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zesikhumba futhi unokwakheka okungasindi okuzwakala kukhululekile kumsebenzisi.
2. I-Innisfree Capsule Recipe Pack Sleeping Mask yazo zonke Izinhlobo Zesikhumba
Lona umkhiqizo othandwa futhi okhethwa abantu abaningi. Lo mugqa wamaski ukhiqizwa ikakhulukazi kusuka emvelweni ngephunga elimnandi kakhulu kanye nekhono elihle kakhulu lokunakekelwa kwesikhumba, elingathuthukisa umbala wesikhumba ngemva kokusetshenziswa ngakunye.
Ngakolunye uhlangothi, imaski yokulala ye-Innisfree Capsule Recipe Pack ihlukaniswe yaba izinhlobo ezi-4 ngokususelwa kuzithako ezihlukene kanye nokusetshenziswa, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
Imaski yepomegranate: Lo mkhiqizo unemiphumela yokulwa nokuguga kanye nokuqinisa kanye nokwenza isikhumba sinwebeka kahle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, le mask inokwakheka okujiyile, ngakho-ke udinga kuphela ukusebenzisa inani elincane ukuze ugcine isikhumba sakho siswakama ubusuku bonke.
Imaski yelayisi: Kule maski, izoba mhlophe futhi iqinise izimbotshana, futhi isize ukuthambisa isikhumba ngendlela efanele kakhulu ngokuthungwa okubushelelezi kodwa okuminyene.
Imaski yetiye elihlaza: Ngamaski etiye aluhlaza, azoba nemiphumela elwa nokuvuvukala nepholile esikhumbeni, futhi abe namandla okunciphisa ukukhishwa kwamafutha esikhumbeni kanye nokwenza isikhumba sibe lula futhi sishelele. Inokwakheka okuminyene kakhulu.
I-Nutmeg ne-Aloe Vera Mask: Ithambisa futhi isiza ukulawula uwoyela. Inokwakheka okuminyene kakhulu nokulula.
Intengo yesithenjwa: 36,000 VND / 1 ibhokisi le-10ml
3. I-Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack ilungele zonke izinhlobo zesikhumba
Imaski yokulala ye-Innisfree I-Whitening Pore Sleeping Pack iqukethe izithako ikakhulukazi ngenxa yokukhishwa kwemvelo okuyingozi kakhulu, futhi inokusebenzisa okulandelayo:
Nge-Jeju tangerine peel extract: Iqukethe izinhlobo ezingafika kwezi-6 ze-Flavonoids kanye nama-antioxidants. Zinemiphumela elwa nokuvuvukala kanye ne-antibacterial, esiza isikhumba sakho sibe sisha futhi sikhanye.
Izakhiwo zetiye elihlaza: Ngalokhu kuzosiza isikhumba sakho ukuba sinciphise ukuguga. Ngesikhathi esifanayo, inamandla okwandisa i-antibacterial esikhumbeni futhi inciphise induna.
I-Glycerin: Basebenza ukunikeza umswakama esikhumbeni futhi benze umgoqo wesikhumba osebenza kahle kakhulu.
I-Alputine 2%: Inomphumela wokuvimbela i-enzyme futhi ikhiqize i-melanin kumaseli ukusiza isikhumba sakho sibe mhlophe kakhulu.
Ngezithako ezikumaski wokulala we-Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack, yaziswa kakhulu ngekhwalithi yayo yokwenza mhlophe, ukusula amabala amnyama namabala esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo unokuthungwa okulula kakhulu okukunikeza umuzwa omnandi uma uwusebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 300,000 VND
4. I-Innisfree Mineral Sparkling Night Spa Imaski yokulala yesikhumba esomile
Lo mkhiqizo uqukethe u-66.7% wamanzi amaminerali futhi unokugcwala okuphezulu kakhulu kwekhabhoni namaminerali ahlinzeka ngomswakama osheshayo esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, ngenhlanganisela yamafutha amaningi abalulekile afana namafutha e-lavender namafutha e-rosehip, kholelwa ukuthi amafutha kalamula aletha umuzwa wenduduzo lapho uyolala.
Izithako eziyinhloko zalo mkhiqizo amanzi amaminerali, i-Night spa compound, i-propanediol, i-glycerol, i-triethylhexanoin, njll. Kanye nezinye izakhi eziningi ezinekhono lokulinganisa ithoni yesikhumba futhi ziqinise umgoqo wesikhumba kanye nokuthuthukisa impilo yesikhumba. thuthukisa isikhumba sakho. ukuthungwa. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo unokuthungwa okukhanyayo futhi okuncanyana okunezici eziqinile ezizizwa zikhululekile esikhumbeni ngesikhathi sokusetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 250,000 VND
5. I-Innisfree Jeju Root Energy Mask yokulala yesikhumba sezinduna
Lona umkhiqizo oklanywe ngendlela yesikhwama futhi uqukethe ikakhulukazi imifino efana nezaqathi, amazambane, i-burdock, njll. Kanye nezinye izinhlanganisela, kukunika umuzwa opholile uma usetshenziswa futhi unikeze isikhumba sakho ithoni ethile.
Ngakolunye uhlangothi, lo mkhiqizo unamandla okusiza isikhumba sakho sicwebezele futhi sibushelelezi. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unezinhlobo ezifika kweziyi-8 ezihlukene, ngayinye yazo izoba nesithako esihlukile semifino, ikunikeza inkululeko yokuzikhethela. Ngesikhathi esifanayo, lo mkhiqizo unokwakheka kwephepha, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 33,000 VND / 1 piece.
Imiyalelo yokuthi usetshenziswa kanjani imaski yokulala ye-Innisfree ngempumelelo
Ukuze ukwazi ukusebenzisa Imaski yokulala ye-Innisfree ngempumelelo, ungabheka imanuwali elandelayo:
Isinyathelo 1: Uzoqhubeka nokuhlanza isikhumba nge-cleaner kanye ne-makeup remover.
Isinyathelo sesi-2: Uzothatha inani elanele lekhilimu ukuze usakaze ngokulinganayo ebusweni bonke.
Isinyathelo sesi-3: Kulesi sinyathelo, uzokwenza massage ngobumnene ebusweni bakho ukuze uvumele izakhi zingene zijule esikhumbeni. Ngemuva kwalokho uzoshiya imaski esikhumbeni sakho bese uyigeza ngakusasa ekuseni. Kufanele futhi usebenzise umkhiqizo ngezikhathi ezithile ukuze uthole imiphumela engcono.
Imaski yokulala ingumkhiqizo osiza isikhumba sakho ukuthi sikhanye futhi sinciphise izimo zokuguga zesikhumba. Ngethemba ukuthi lesi sihloko sikusize ukubamba imikhiqizo Imaski yokulala ye-Innisfree okungcono kakhulu namuhla.
Xem Thêm [Review] Top 8 mặt nạ collagen Hàn Quốc tốt nhất hiện nay | Muasalebang
5+ Cách tăng dung lượng điện thoại Oppo nhanh chóng | Muasalebang